Abukaatoo: Raga Baatoota Dhaggeffachuuf Bellamnii Dhumaa Kenname Yeroo Biraatti Dabarfame – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
WASHINGTON, DC — Hogganoota partii mormituu ka Kongreesa Feedaraala Oromoo fi kanneen biroo irratti raga-baatoota yeroo dhumaaf ka dhaggeeffatamu Kamiisa Amajjii 5 bara 2017 akka ta’e manni murtii federaalaa olaanaan kan ramaddii Lidataa beeksisee ture. Garu abbaan alangaa raga-baatoota dhiyeeffachu hin dandeenye, jechuun mana-murtiitti waan iyyateef jecha guyyaa 19 booda dhaggefachuuf murteessee jira – manichi-murtii.
Abukaatonni himatamtootaa murtii kana morman iyyu manni-murtii gama isaan sababaa amansisaa taanaan guyyaa biraatti dabarsuun ni danada’ama, jechuun murticha cimsee jira. Abukaatonnis bellamni itti-aanu isa xumuraa akka ta’uuf gaafachuun isaanii beekamee jira. Bellamni sababaa addaan yeroo dabarfamuu kun yeroo shanaffaa dha jedhu abukaatonni hidhamtoota.
Kana cuqaasuun gaaffii fi deebii guutuu dhaggeeffadhaa
Prizidaantiin Ameerikaa Jijjiiramuun Imaammata Isheen Itiyoophiyaaf Qabdu Hin Jijjiiru:Mormitoota